काठमाडौं । नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख डा. श्यामबाबु यादवले बिहारको सितामढीको एक कलेजको आइएसीको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी (बीएमएस) अध्ययन गरी एमडी गरेकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सप्रमाण उजुरी परेको आठ महिना पूरा हुन लागेको छ । उनले आइएसीको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बीएमएस अध्ययन गरेकाले छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै २०७५ साउन ८ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । दर्ता नं ८८९ रहेको उक्त उजुरीमा उनले नक्कली आइएसी र त्यसका आधारमा बीएमएस पास गरेका सबै प्रमाणपत्र समेत पेश गरिएको थियो ।
नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख यादवले नेपालमा आयुर्वेद सहायक अध्ययन गरिरहेको समयमा भारतको बिहारमा विज्ञान बिषयमा आइएससी अध्ययन गरेको देखिएको छ । डा. यादव त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आयुर्वेद क्याम्पसमा सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता अध्ययनका लागि २०४६ मा भर्ना भएका उनको प्रमाणपत्रबाट खुल्छ । उनले २ बर्षमा आयुर्वेदको कोर्ष पूरा गरी २०४८ साउन १३ मा पास गरेको देखिन्छ ।
प्राविधिक बिषय आयुर्वेद, अहेव, सीएमए जुनसुकैमा कम्तीमा ३ महिना प्रयोगात्मक (ओजेटी) गर्नैपर्छ । कोर्ष २०४७ चैतमा सकिए पनि ओेजेटी ३ महिना कम्तीमा गर्दा उनको पढाइ २०४८ साउनसम्म नै हुन्छ । डा. यादवले २०४६ साउनदेखि २०४८ साउनसम्म नै नेपालको आयुर्वेद क्याम्पसमा नियमित अध्ययन गरेर मात्र प्रमाणपत्र पाएका हुन् । सन् १९८९ जुलाईदेखि १९९१ जुलाईसम्म उनले नेपालको आयुर्वेद क्याम्पसमा अध्ययन गरेको देखिन्छ । तर उनले बीएमएस अध्ययनका लागि पेश गरेको भारत बिहारको सीतामढीको रामऔतार राजकिशोर माधुरी यादव कलेजको प्रमाणपत्रमा सन् १९९० देखि १९९२ सम्म आइएससी अध्ययन गरेको उल्लेख छ । आयुर्वेद प्राविधिक त्यो पनि मेडिसिन बिषयमा अनिवार्य कक्षामा उपस्थित हुनैपर्छ ।
आइएससी विज्ञान बिषय भएकाले कक्षामा उपस्थित हुनैपर्छ । उनले नेपालमा आयुर्वेद अध्ययन गरिरहेकै समयमा बिहारको सितामढीबाट कसरी आइएससी पास गरे ? यिनै प्रश्न उठाउँदै उनीबिरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीमा नेपाल र भारतमा एउटै समयमा नियमित उपस्थित भई दुवै ठाउँबाट कसरी अध्ययन गरे ? उनले दुवै प्रमाणपत्रबाट जागिर खाएको देखिन्छ । यसरी नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाँदैआएका यादवलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
अख्तियारमा दिएको उजुरीको बोधार्थ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)लाई पनि दिइएको छ । दुवै बिषय विद्यार्थी स्वयं कक्षामा उपस्थित भएर अध्ययन गर्नुपर्ने बिषय भएकाले एउटा नक्कली नै हो
श्यामबाबु यादव यसअघि आयुर्वेद काउन्सिलको कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका छन् । केपी ओली सरकारमा उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि उनी पुनः नरदेवी अस्पतालको प्रमुख भएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा बीएमएस र एमडी गरी सरकारको आयुर्वेद अस्पतालको प्रमुख पद प्राप्त गरिसकेका यादवमाथि छानबिन उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उजुरीमा अख्तियारले सुनुवाइसम्म गरेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, फागुन २७)